चम्चा वा फोर्किंग कुनले तपाईंलाई हान्गर बनाउँछ? - प्रेम सेक्स
धेरै जसो सेक्स तपाईको बोरियतलाई शुन गर्ने तरिका हुन्छ वा तपाईको मनोरन्जनको लागि स्रोत हो। त्यो प्रक्रियामा, तपाईं पूरै कार्यको लागि जोस र उत्साह हराउनुहुन्छ। तर, के भयो लाई पुनर्जीवित गर्न र यसलाई समान उत्साहको साथ फिर्ता ल्याउनको लागि, तपाईंले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि तपाईंको यौन भूकको लागि वास्तवमा के उत्तम काम गर्छ र यदि यसले तपाईंको दुबैको लागि काम गर्दछ भने।
चम्चा र काँटा दुई यौन स्थिति हो जुन सामान्य रूपमा परिचित छन् तर सामान्य रूपमा गरिदैन। किन? किनभने यो मिसनरीमा प्रदर्शन गर्न सजिलो छ - कम प्रयास र कम समय लगानी। नयाँ स्थानहरू प्रयास गर्दा तपाईंको पक्षमा काम गर्न सक्दछ र तपाईंलाई थप एड्रेनालाईन भीड वा क्यालोरी बर्न दिन्छ जुन तपाईंलाई असाध्यै उत्सुक थियो!
चम्चा परिमार्जन गर्न सकिन्छ तपाईको मुड र माग अनुसार - डबल ह्वामी, हामी? यदि तपाईं केवल मुड्नको लागि मूडमा हुनुहुन्छ र तपाईंको SO मा नजिक वा जडान भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने, चम्चाई उत्तम रूप हो! सरल - तपाइँको पछाडि तिनीहरूलाई सामना गर्दै तपाइँको साथीसँग कुकल्दै। यसलाई अधिक घनिष्ठ बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईं यसलाई एक सेक्सन स्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छaद्रुतको लागि पूर्ण विजेता! तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको आफै सजिलैसँग समायोजन गर्नु हो तपाईको प्रवेशलाई सजिलो र कम गन्दा र प्रयोगात्मक बनाउनका लागि। एकचोटि तपाईंले पकड र गति प्राप्त गर्नुभयो, तपाईं अझै पनि आफ्नो मनपर्ने चलचित्र हेर्दै गर्दा अल्छी रातमा यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यो अप्ठ्यारो हुन सक्छ यदि तपाईं उस्को लागि उत्तम आसन फेला पार्नुहुन्न जसले त्यसपछि vibe मार्न सक्छ र तपाईंलाई स्थितिबाट पूर्णरूपमा हटाउँछ। यदि पहिलो पटक यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सुस्त लिनुभयो र ठीक आसन लिनुभयो। त्यसोभए तपाईं जानु राम्रो हुनेछ!
एक अर्कासँग उल्टिएका दुई काँटाको टिन कल्पना गर्नुहोस्। ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा हो जुन मानव सम्पर्कसँग हो। अधिक स्पष्टता ल्याउनको लागि - फोर्किंग भनेको जब एक जोडी तेर्सो रूपमा आफ्ना खुट्टा एक अर्कामा अल्झिएको हुन्छ। यो स्थिति कठिन र बोझिल हुन सक्छ, यदि राम्रोसँग गरेको छैन भने। यो चम्चा भन्दा बढी कामुक छ किनकि तपाईंले आफ्नो साथीको जननांगलाई आफ्नो जाँघमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, र अन्ततः केही रोमान्सको लागि मूड सेट गर्नुहुन्छ। तपाईं या त आफै चिप्लन को लागी स्थिति आराम गर्न सक्नुहुन्छ, चम्चा जस्तै, वा तपाईं यसलाई एक निशान अगाडि लिन र सम्भोग मा लिप्त लिन सक्नुहुन्छ।
यदि राम्रोसँग गरेको छैन भने तपाईं आफ्नो फिलाको मांसपेशीहरू तान्न र तिनीहरूलाई तान्न सक्नुहुन्छ। तपाईको शरीरको चाललाई अवलोकन गर्दै तपाइँलाई स्थितिमा बानी हुने अनुमति दिन बिस्तारै यसको प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ।
चम्चा वा फोर्किंग - कुनले तपाईंलाई हान्गर बनाउँछ?
जबकि समग्रमा यौन तपाईं र तपाईंको पार्टनरको बीच शारीरिक र भावनात्मक सम्बन्धको एक धेरै सन्तोषजनक कार्य हो, केहि स्थितिहरू थाहा पाएर जुन वास्तवमै बलियो सम्बन्धहरूलाई बढावा दिन्छ। यदि चम्चा बनाउछ भने तपाईलाई बढी गडबडी बनाउँनुहुन्छ र सधैं तपाईंको अक्सीटोसिन उच्च स्तरमा राख्नुहुन्छ - तपाईं चम्चा व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको साथी एड्रेनालाईन लाई बढावा दिन र केही क्यालोरी तान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको आदर्श तौल भेट्न - तब फोर्किking तपाईको सब भन्दा राम्रो कोपिला हो! कुनै पनि तरीकाले, तपाइँ भोकाउनु हुन्छ (सशोषित होइन), र दुबैले तपाईंलाई भोकाउनेछ!
यो पनि पढ्नुहोस्: W तर कसरी खराब सेक्सले तपाईंको सम्बन्धलाई विपरीतमा असर गर्न सक्छ
कसरी घर मा प्राकृतिक रूप बाट झर्ने रोक्न को लागी
कसरी blemishes को छुटकारा पाउन
कसरी कपाल रोक्न को लागी प्राकृतिक रूप बाट
पेट कम गर्न crunches कसरी गर्ने
कालो कपाल विकासको लागि घरेलु उपचार
घरमा छालाको चमकका लागि सौन्दर्य सल्लाहहरू